Distributor Air Oil | SMX-YQ Distributor Rivotra Solika, Valve + Rivotra
Home/Fanosorana solika amin'ny rivotra/SMX-YQ Distributor solika-rivotra, mpaninjara solika fanodinana solika ao amin'ny rafitra fanosotra
1. Max. solika miasa latsaky ny 100Bar,
2. singa afovoany maromaro ho an'ny habetsahan'ny sakafo samihafa
3. Iray na roa fivoahana seranan-tsambo ho an'ny safidy
SMX-YQ mpaninjara rivotra solika dia apetraka amin'ny mpaninjara sy mpaninjara mandroso tsipika tokana. Misy fidirana iray, seranan-tsambo roa, seranan-tsolika 3 hatramin'ny 16 ary seranan-tsambo. Azo ampiharina amin'ny rafitra fanokanan-tsolika mimari-droa tokana sy rivotra ary tsipika roa - rafitra fanosihosena solika sy rivotra.
SMX-YQ Oil+Air Fampiasana mpaninjara
Ny mpaninjara rivotra solika SMX-YQ dia tsy maintsy ampiasaina amin'ny fepetra momba ny tontolo iainana ao anatin'ny fepetran'ny medium.
Compressed rivotra interface tsara dia tsy maintsy miaraka amin'ny menaka sy ny rivotra rafitra natokana voaporitra rivotra tambajotra fantsona fantsona fifandraisana, dia voarara tanteraka amin'ny hafa tsy fantatra fiaviana ny rivotra famatsiana tsipika fifandraisana, mba hisorohana ny loza.
Ny fametrahana ny SMX-YQ mpaninjara rivotra solika dia tokony homena laharam-pahamehana amin'ny toe-javatra miasa tsara, ny fiovan'ny mari-pana dia kely, tsy misy fahasimbana amin'ny haino aman-jery voakasika, tsy navela hametraka mandritra ny fotoana maharitra amin'ny fotoanan'ny taratra hafanana avo.
Tokony hovana ny isan'ny seranan-tsambon'ny mpaninjara solika SMX-YQ, azafady anontanio ny toromarika anay, na manontany anay mivantana.
Kaody famandrihana an'ny SMX YQ Oil Air Lubrication Distributor Series
(3) Laharan'ny fizarana fizarana
(4) Type piston = 04, 08, 16, 24, 32, 40 (Jereo ny tabilao etsy ambany)
(5) Distributor karazana solika sy rivotra
[email voaaro]2021-11-17T22: 00: 16 + 00: 00